छोरोको वद्माशीले मीरा राजपुत हैरान र सोध्छिन् तपाईको वच्चाहरुले पनि त्यस्तै गर्छन् ? « गोर्खाली खबर डटकम
गोर्खाली खवर, एजेन्सी, ३१ चैत्र । वलिउड एक्टर शाहिद कपुरकी पत्नी मीरा राजपुत आफ्नो डेली रुटिनको खास कुराहरु आफ्नो प्रशंसकको विच साझा गरिरहन्छिन् । उनले एक भिडियोमा आमा भए पछि यस्तो मुश्किलको सामना पनि गर्नु पर्छ ? खासमा मीरा तयार हुनको लागि मेकअप गरिरहेकी थिईन् ।
उनको मेकअप स्पंज गायव भयो । उनले त्यो खोज्न लागिन् आखिरमा त्यो स्पंज उनको छोरा जैन कपुरको स्विमिङ्ग पुलवाट प्राप्त भयो । त्यो पनि ड्यामेज भएको अवस्थामा । त्यो उनको छोराको कारनामा रैछ । मिराले क्याप्सनमा लेख्छिन्, के तपाईको साथमा पनि यस्तो हुने गर्छ या मेरो साथ मात्र हो ? त्यस पछि युजर्सले प्रतिकृया दिन्छन्, यो सवै आमाहरुको साथ हुन्छ ।
कसैले यो आमाहरुको जिन्दगी भनेका छन् । कसैले आफ्नो कहानी पनि भनेका छन् । मीराले हालसालै एक तस्विर पनि पोष्ट गरेका छन् जसमा उनले पीच कलरको प्रिन्टेड स्विम ड्रेस लगाएकी छिन् । उनको हातको माथि एक स्टोल राखेकी छिन् ।
ओभरसाइज्ड सनग्लासेसको साथ ह्वाइट कलरको कोल्हापुरी चप्पलले उनको लुकलाई पूणता दिएको छ । मीराको उक्त तस्विरमा धेरै सेलिव्रेटिहरुले कमेन्ट गरेका छन् । सिंगर कनिका कपुरले गर्जियस भनेका छन् । त्यस्तै एक युजरले तपाई एकदम राम्री हुनुहुन्छ भनेका छन् । कसैले हट भनेका छन् ।